सेनाकाे हवाइ सुरक्षा पाेष्ट कोटेश्वरबाट गाजा चाेरी (भिडियाेसहित)
गणेश विक काठमाडाैँ । लागुऔषधको दुव्र्यसन तथा अवैध ओसार–पसार बहुपक्षीय सरोकारको विषय हो । यो समस्या कुनै स्थान, मुलुक वा क्षेत्र विशेषको समस्या मात्र नभई विश्व मानव समुदायकैसामुहिक समस्याका रुपमा प्रकट हुदै आएको छ । विश्वका सवै जसो राष्ट्र यस समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्। नेपालमा सन्१९६० को दशकको सुरुदेखि हिप्पी संस्कृतिको आगमनका साथै लागुऔषध दुव्र्यसनको समस्या जटिल हुदै गएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै ५० हजार नाघिसकेको अनुमान गरिएकोमा हालको अव्यवस्थित शहरीकरण, संगठित आपराधिक संजालको प्रभाव बृद्धि, तथाकथित आधुनिकीकरणको विस्तार आदिका कारणले हालका दिनमा यो संख्या निकै बढ्न गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आज बिहीवार काठमाडौं उपत्यका दिपनगर मार्ग कोटेश्वर कान्तिपथ मिडियाकाे ठिक अगाडी रहेकाे सेनाकाे हवाइ सुरक्षा पाेष्टबाट गाजा चाेरी भएकाे छ । उक्त भिडियाेमा गाजा चाेर प्रत्क्षय देख्न सकिन्छ । यसरी हवाइ पाेष्टबाट मात्र हाेइन नेपालका बिभिन्न भागबाट चाेरी हुँने गरेकाे छ ।
देशको एक मात्र अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलको सिमानामै भएको नेपाल आर्मी ब्यारेक भित्र यसको बिपरित दृश्य देख्न पाइन्छ । सबैभन्दा चुस्त मानिएको सुरक्षा निकायको सिमा लगाएको तारजाली हेर्दा लाग्छ यो ब्यारेक कुखुराको खोर बडी जस्तै देखिन्छ ।
ब्यारेकको मूल गेट त एउटा मात्रै छ तर यहाँ त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ बाट भित्र छिर्न नसकियोस, आज बिहिबार भयो यस्तै । केहि युवा ब्यारेक भित्र छिरे र धमाधम गाँजा माड्न थाले । गाँजा उनीहरुले आफूसंगै ल्याएका भने थिएनन् । ब्यारेक भित्र छिरेर, भित्रै उम्रिएको गाँजा माड्दै माद्होस भएका युवा पुस्ता देख्दा सुरक्षा निकाय र उनीहरुले नागरिक हितका निम्ति गरेको अन्तरास्ट्रिय सन्धिलाई कुरीकुरी भन्न मिल्दैन र ?
गाजा सहरी भागमा बढ्दो मात्रामा रहेको पाइन्छ । खासगरी जोखिम समूहका युवायुवतीमा लागुऔषधको दुरुपयोग तथा दुव्र्यसनको प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ भने विगतमा गाँजा, चरेस र हेरोइनको सेवनमा सिमित रहेका लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुले सन १९९० को दशकको सुरुवात सँगै सुईको माध्यमबाट समेत लागुऔषध प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । बहुऔषधीय प्रयोग र दुव्र्यसन गर्ने विधिमा आएको परिवर्तनका कारण लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरु कुपोषण, रक्तअल्पता, हेपाटाइटिस, यौनजन्य रोग र एच.आई.भी. एड्स जस्ता खतरनाक रोगबाट संक्रमित हुने क्रम बढ्दैगएको छ । समग्रमा एच.आई.भी.को संक्रमणको अनुपात सुई प्रयोगकर्ताहरुमा बढी देखिएकाले उनीहरुद्वारा लागुऔषध प्रयोकर्ताहरुको समूह, आफ्नै परिवार र अन्य व्यक्तिहरुमा एच.आई.भी.को संक्रमण गर्ने संभावना बढेको छ ।
शहरी क्षेत्रका महिलाहरुमा समेत लागुऔषध दुव्र्यसनको समस्या बढिरहेको छ । दुव्र्यसनको कुलतमा फसेका महिलाले पारिवारिक र सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरुले यस विषयमा कसैलाई पनि जानकारी गराउँदैनन् ।
लागुऔषधको अवैध ओसार–पसारमा संलग्न संगठित गिरोहको गतिविधि सिमावर्ती क्षेत्रमा झन्बढ्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा उपभोग हुने वा नेपाल हुदै अन्य मुलुकमा अवैध ओसार–पसार हुने हिरोइन स्थलमार्ग र हवाईमार्ग हुदै नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।